Amaswidi weSicilian iSiculo Ice Cream khekhe - Genoa
Ukuvulwa okuqhubekayo kweviki
Isikhathi Eqhubekayo: 13:00 - 01:00
Ukunambitheka kwangempela kwesiko laseSicily
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-64)
Isitolo se-ayisikhilimu seSiculo e Via Trebisonda 47 a Genoa yindawo efanele ukunuka Amaswidi eSicilian nezibiliboco zikhekhe zakudala, kufaka phakathi Amaswidi eSicilian, noma u-ayisikhilimu omuncu kakhulu kusuka ku Isitolo se-ayisikhilimu se-Artisan.
Amaswidi amaSicilian iSiculo Gelato pastry eGenoa - Isitolo se-khekhe
Indlela ngayinye ye Amaswidi eSicilian di Isitolo se-ayisikhilimu seSiculo kuncishiswa ubuciko bezinsuku zokupheka khekhe abanolwazi olufakazelwe ku Amaswidi eSicilian. Zonke Amaswidi eSicilian bahlukile futhi balungiselelwe ngokunakekela nangomdlandla wokukunikeza kusuka ekunambithekeni kokuqala ubuciko obusezingeni elincane lobuhle. Kusuka Isitolo se-ayisikhilimu seSiculo a Genoa uzothola i-mignon, i-pasta, Amaswidi eSicilian namakhekhe owomile, intokozo yesibiliboco. Kukhona okonakalisiwe kuphela ongakukhetha ngokuqondene nokuzikhethela Amaswidi eSicilian nezinye izinhlobo zezidingo zonke.
Amaswidi weSicilian iSiculo Gelateria pastry shop eGenoa - Ice cream shop
UNella Isitolo se-ayisikhilimu se-Artisan Isitolo se-ayisikhilimu seSiculo e Via Trebisonda a Genoa ukusetshenziswa kobisi olusha nezithako zokuzikhethela zokuqala kuhlangene nekhono labenzi be-ayisikhilimu abaphambili. Lokhu Isitolo se-ayisikhilimu se-Artisan yindawo ekahle uma ufuna ukunambitha u-ayisikhilimu wangempela waseSisilia: la Isitolo se-ayisikhilimu se-Artisan inikeza ukunambitheka okungaphezulu kuka-60 kwe-ayisikhilimu futhi i-granite ukukhetha kusuka. Ukucutshungulwa kwesimilo kwe Isitolo se-ayisikhilimu seSicilian Artisan Gelato Ice Cream eGenoa sikhombisa ngokuphelele isiko lakudala le Amaswidi eSicilian kuhlanganiswe nobuqiniso bezinto zokusetshenziswa, ngomphumela wokwenza kahle kweqiniso kumakhasimende we Isitolo se-ayisikhilimu se-Artisan.
AmaSwidi Amaswidi eSiculo Gelato eGenoa - Amakhekhe abekiwe
Isitolo se-ayisikhilimu seSiculo ibona nsuku zonke Amaswidi eSicilian kodwa futhi amakhekhe abekiwe esicelweni esivezwe ngosayizi omkhulu ubuqambi futhi yenzelwe ukwenza izinkumbulo zakho ezibaluleke kakhulu zikhetheke. TO Genoa e Isitolo se-ayisikhilimu seSicilian Artisan Gelato unga-oda ikhekhe lakho lomshado noma Amaswidi eSicilian ukugubha noma yimuphi umcimbi owufunayo, ngenxa yobuchwepheshe beqembu Isitolo se-ayisikhilimu seSicilian Artisan Gelato.
Amaswidi amaSicilian iSiculo Gelato khekhe eseGenoa - amakhono
La Isitolo se-ayisikhilimu seSicilian Artisan Gelato e Via Trebisonda 47 a Genoa idume ngekhwalithi ye Amaswidi eSicilian alunikeza amakhasimende amaningi nsuku zonke. I-lab Isitolo se-ayisikhilimu seSicilian Artisan Gelato inikeza okunezinhlobonhlobo eziningi zamaswidi agcwele ushokolethi noma i-custard, ehlotshiswe ngezithelo noma ngamaphrinta, nge-liqueur noma ehlanganiswe ne-icing, Amaswidi eSicilian njenge-cannoli, i-cassate, Amaswidi eSicilian yokunameka kweMarzipan ne-almond. Vumela ulingwe okumnandi Amaswidi eSicilian della Isitolo se-ayisikhilimu se-Artisan ISiculo Gelateria Pasticceria eGenoa.
Ikheli: UVia Trebisonda, 47
I-POSTAL CODE: 16129
Ucingo: 010 3629834
Inombolo ye-VAT: 03482260100